Dalka Koonfur Afrika Oo Laba Muwaadin Ay Kaga Dhinteen Weerarkii UNDP Ee Muqdisho | Salaan Media
Dalka Koonfur Afrika Oo Laba Muwaadin Ay Kaga Dhinteen Weerarkii UNDP Ee Muqdisho
June 22, 2013 Muqdisho(SM) -Dalka Koonfur Afrika ayaa waxaa si weyn looga hadal hayaa labo kamid ah dadkii ku dhintay weerarkii Arbacadii ka dhacay xafiiska UNDP ee magaalada Muqdisho.
Alan-Simpson-Morne-lotter-Alan Simpson iyo Morne Lotter ayaa u shaqeenayey shirkada MECHEM ee dalka Koonfur Afrika laga leeyahay ee Qaramada Midoobay u qaabilsan dhanka maamulka xafiisyada ay ku leeyihiin gudaha dalka Soomaaliya.
Raggan ayaa la sheegay in qaarkood ay horey uga soo shaqeeyeen ciidamada Militariga Koonfur Afrika gaar ahaan ninka lagu magacaabo Morne Lotter oo asagu 42 sano jir ah, ayaa horey sarkaal uga soo ahaan jiray ciidamada dalka Koonfur Afrika sida ay sheegtay xaaskiisa Yvette Lotter oo wareysi siisay warbaahinta dalka Koonfur Afrika.
Weerarkii ka dhacay todobaadkan xafiiska UNDP ee Muqdisho ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 16 qof oo u badan Soomaali isugu jira shaqaalaha Qaramada Midoobay iyo dad rayid ah oo goobta ka ag dhawaa, waxaana weerarkaasi ku dhintay sadex ajaanib ah oo ay ku jiraan labadaasi nin ee kasoo jeeda Koonfur Afrika iyo haweenay u dhalatay dalka Kenya.
Saxaafada Koonfur Afrika ayaa si weyn u hadal heysa muwaadiniintooda lagu dilay weerarkii Muqdisho xili todobaadyadii lasoo dhaafay saxaafada dalkaasi si weyn uga hadleysa dhibaatooyinka lagu hayo Soomaalida ku dhaqan dalkaasi Koonfur Afrika